मानिसले आफैंलाई चिन्न नसक्नुको कारण
मानिसको खोज सुख हो । सुख पाएपछि अरु पाउने कुरा केही पनि बाँकी रहन्न । अन्तिम खोज सुख हो र सबै प्रकारका प्रयासहरु, प्रयत्नहरु सुख प्राप्तिको लागि केन्द्रित हुन्छ । सुख पाउनु अन्तिम लक्ष्य हो । यदि सुख पाउनु लक्ष्य हो भने सुखको विषयमा बुझ्नु पनि त प¥यो नि । सुख कति प्रकारका हुन्छन् ? सुख उत्पन्न हुने स्थान, कहाँ–कहाँबाट सुख उत्पन्न हुन्छ ? थाहा त पाउनुप¥यो नि । आज यही सुखलाई बुझ्ने प्रयास गरौं ।
२०७६ जेठ ११ शनिबार ०७:२०:०० मा प्रकाशित
मानिसहरु किन राजनीतिज्ञसँग टाढा रहन चाहन्छन्
‘अहिंसा परमो धर्मः’– अहिंसालाई सबैभन्दा ठूलो धर्म मानिएको छ । तर हिंसा भइहाल्छ । यो हिंसाबाट कसरी बच्ने होला ? प्रश्न आएको छ । हिंसाबाट बच्नुभन्दा
तनावबाट यसरी मिल्छ छुट्कारा
मैले सुनेको थिएँ, एकपटक भगवान्को अदालतमा दुईटा मुद्दाहरु परेछन् । अनि मुद्दा पेश गर्ने मानिसले भन्यो, दुईटा मुद्दा परेका छन् भगवान्, पहिलो मुद्दा
आज तपाइँको भाग्य कस्तो छ ? हेनुस् राशिफल
मेषः मिष्ठान भोजन वृषः भाग्य वृद्धि मिथुनः अपव्यय कर्कटः प्रियजन भेट सिंहः वैमनस्यता कन्याः मनोकांक्षा पुर्ण तुलाः वादविवाद वृश्चिकः शत्रु
एजेन्सी । वास्तुशास्त्रको अनुसरण पौराणिक समय देखि नै गरिँदै आएको भएपनि पछिल्लो समय यसको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ । यसको आधुनिक व्याख्या गर्न शुरु